"Waxaan Lugood aan la casriyeeyay si version ugu dambeeyay. Si kastaba ha ahaatee, waa cajiib in aanan fahmi karaa sida ay u playlists ka Lugood aan wareejiyo aan iPod. Ma jiraan wax trick oo ku saabsan this? Fadlan caawiyo."
Lugood waa mid ka mid ah qalabka ugu weyn ee isticmaala inay heeso ka Lugood wareejiyo iPod. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa design cusub ee Lugood 11 sameeyaan dadka isticmaala qaar ka mid ah way ku adag tahay in ay u hagaagsan playlists in iPod. Iyo qaar ka mid ah dadka isticmaala cusub iPod ma garanayaan sidii ay u gudbiyaan nuqul playlist ka Lugood in iPod aad. Dhab ahaantii, waa mid aad u fudud in ay gaarto goolka. In ay qayb ka socda, 2 siyaabo fudud ayaa la soo bandhigay in aad si ay u gudbiyaan playlist ka Lugood in iPod.
Playlists in iPod aan Lugood
Hagaagsan Playlists in iPod la Lugood
Lugood wanaagsan playlists in iPod wareejinta. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad u baahan tahay si xubnuhu aad iPod la mid computer oo kaliya. Waxay ka dhigan tahay, in aad looga baahan yahay oo kaliya in ay playlists ka computer gaarka ah lagu wareejiyo si aad iPod. Haddii kale, digniin soo bixi doona, kuu sheegaysa in ay masixi doonaa iPod. Waa maxay ah wax aad u xun. Xaaladdan oo kale - playlists beddelashada ka computer ka duwan iPod, waxaad isku daydaa inaad TunesGo Wondershare in aad nuqulka playlists Lugood in aad iPod. Waxa aan waligii masixi doonaa iPod. Waa kuwan tallaabooyinku.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare TunesGo
Riix badhanka Download hoose si aad u dejisan TunesGo Wondershare. Ka dib markaas, loo soo dajiyo iyo waxa maamula on your computer. Connect aad iPod kombiyuutarka aad dhex cable USB taas oo aad iPod ah. Wondershare TunesGo ogaan doonaa iPod oo muujiyaan furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Transfer playlists ka Lugood in iPod
In Wondershare galeeysid TunesGo, waxaad ka arki kartaa playlist. Waxaa Riix si ay u galaan guddi ay gacanta u playlists. Ka dibna waxaad arki kartaa Add button dusheeda. Riix saddexagalka waxaa hoos ku dooro dar playlists Lugood . Hubi playlists aad u baahan tahay iyo riix OK .
mar kasta oo Lugood syncs playlist ah in aad iPod, playlist hore la saari doonaa. Waxaa laga cabsado, gaar ahaan marka aad raba in aad u sii mid ka mid ah jirka. haddii aad rabto in aad dhoofin playlists Lugood in aad iPod Oo aad dhawrtid playlists jir, Tunesgo xallin kartaa dhibaato.
Sida aan soo sheegnay in Lugood waa aalad default taas oo ah in ay ku caawiyaan in ay u guuraan playlists ka Lugood Library in iPod, si la isticmaalayo Lugood si hagaagsan Lugood playlists in iPod noqon kartaa habka asalka ah. Ka dib markii tallaabooyinka hoose, hubaal inaad gaarto doonaa kaaftoomi gool aad si xor ah.
Tallaabada 1. Lugood Daahfurka
Burcad Lugood iyo in la hubiyo waa nooca ugu dambeeya. Haddii aan, aad u maleeyeen tahay in la casriyeeyo. Waxaad kartaa halkan kala soo bixi Lugood . Haddii playlist aad rabto in lagu wareejiyo ka Lugood in iPod ayaa hore u jirey ee Lugood, u gudub Tallaabada 2. Haddii aan, ka akhriso info soo socda.
Playlists Import in Lugood, haddii playlists aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan si aad iPod ma aha in Lugood Library, waa in aad guji Lugood File menu, dooro Library > Import playlist in ay dajiyaan playlists in Lugood.
Samee playlists cusub: haddii aad rabto in la abuuro playlist cusub, riix View menu dooro Show galeeysid . Riix + icon hoose ee galeeysid in la abuuro playlist ah. Ka dibna riix tab Music ku galeeysid ugu sareeya. Hubi songs doonayay oo xaq click. Dooro Add to playlist .
Tallaabada 2. nidaameed Lugood Playlists in iPod
Connect aad iPod la your computer via aad iPod USB cable. Marka xiran si guul leh, waxaad arki doontaa waa hoos AALADAHA galeeysid ah. Haddii aadan arki galeeysid u Lugood, muujisaan adigoo gujinaya View > Show galeeysid .
Riix si aad iPod hoos AALADAHA. Dhinaca midig ee suuqa, waxaad arki doontaa Music tab. Waxaa Click. Hubi nidaameed Music > soo xulay playlists, fannaaniin, albums, iyo qaybaha . Dooro playlist aad u baahan tahay oo guji codso .
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in iPod
Sida loo Copy Music ka iPod in Computer
Sidee si ay u gudbiyaan Songs ka iPod in Lugood
Sida loo Edit Playlists on iPod
Sida loo Copy Playlists ka iPod in Lugood
Sida loo kaabta iPod Music inay Mac
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Computer si ay iPod taabashada
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Playlists ka Lugood in iPod